Ramahavaly - KoloikoWiki
Ny ninoan'Ilaidama ny sampy Mahavaly sy ny bibiny
Tamn'ny voalohany dia tsy nino izy.
Indray andro nampitsaboina an’Andriamary tany Ambohitrondrana Mahavaly. Nony vita ny fitsaboina dia hoy Ilaidama: "Alao Mahavaly fa lasa nampitsaboiko an’Andramary fa manao mody adala ireo Ambohidralambo."
Nony tonga taty Amboatany dia nasian’Ilaidama teny hoe: "Asandrato amin’izay omby famonoanareo izy ka raha maty ny omby dia ento mianatsimo ka ataovy izay tena mahatezitra azy. Entinareo Ambohidralambo rehetra."
Dia nentiny tany Antananarivo i Mahavaly ka nony mby tao Anatirova dia hoy izy hoe: "Ndeha horaisiko izy. Ianareo olona mody adala." Dia noraisiny, ka raha vatany vao mby antsorony ny kilangala dia nazerazeran’i Mahavaly eran’izao Rova izao Ilaidama.
"Raiso izy!" hoy Ilaidama.
Tsy nety nandray ny mpitahiry.
"Ario, ilay roana!" hoy izy.
Nefa tsy nety nariana i Mahavaly fa nipetaka taminy ihany. Sasatra nanary azy zy fa tsy nety.
Ary hoy Laidama: "Manasina vola venty sy loso ary ariary. Dia mino aho, hoy izy, fa tano tsara ihany. Izaho dia efa miaiky aho."
Dia nody Mahavaly.
Vao izay indray izy vao nino, fa ny vahoaka tsy niova fa ny sampy ihany no nitokiany. Nefa kosa Ilaidama tsy nino ny bibin'i Mahavaly.
Hoy Laidama: "Aiza no ahavorianareo ny biby?"
"Raha antsoinay dia vory!" hoy ny mpitahiry.
Ary hoy I Laidama: "Mba itondray ary aho!"
Dia nitondran’ny mpitahiry sy Ambohidralambo fito sobika izy.
Nony tonga tao Antananarivo dia hoy Laidama: "Aiza no nahazonareo?"
Namaly ny mpitahiry hoe: "Nantsoina hanantona an'i Mahavaly ny biby. Izay no nahazoanay azy."
Hoy Laidama: "Ndeha ento mody izy, fa aza akaikezina. Fahano amin’izay hamahanareo azy. Efa hitako izao. Mino aho."
Nanao trano tany Soanierana Leigro (Legros). Indray andro, nahita an-dRamahavaly niakatra tamin'Ilaidama izy dia nanontany hoe: "Inona iny?"
Dia namaly ny olona hoe: "Ramahavaly"
"Inona izay Ramahavaly izay?"
"Sampy masin’ny Mpanjaka!"
"Ary inona no efan’izy io?"
"Mahafaka ny zavatra rehetra."
"Raha mahafaka ny zavatra rehetra dia avelao hiady amiko."
"Tsy izahay no tompony fa Ilaidama. Ndeha hilaza aminy hianao?"
Dia lasa izy nilaza tamin’ny Andriana nanao hoe: "Avelao hiady amiko Ramahavaly, hizahako izay vitany."
Hoy ny Andriana hoe: "Aoka itsy! Fa ianao vazaha ary io Malagasy ka tsy hampiadiako aminao!"
Fa namaly izy hoe: "Tsia. Avelao mba izahako izay efany amiko."
"Raha rarako tsy zaka ianao, dia indro izy hiady aminao."
Dia nidina izy nankeny Andohalo nirahan’ny Andriana. Ary hoy ny Andriana miantso an’ I Leigro: "Mandehana ianao mankany aminao fa indro Ramahavaly hankany aminao."
Dia lasa Ramahavaly nankany Andohalo. Nanatona teo I Leigro. Dia nivory ny vahoaka sy ny vazaha betsaka. Ary nipetahan’ny bibilava makadiry ohatra ny ranjo I Leigro. Mafy be. Ary nony efa nipetaka ny biby dia lasa Ramahavaly nody tany anaty Rova, ny bibilava nilaozany teo amin’ I Leigro nangehy azy am-balahana moa va tsy sikina ao am-balahana.
Dia nidradradradra teo I Leigro nanao hoe: "Ilazao Radama fa masina tokoa Ramahavaly, ka tsy miady aminy aho. Fa asaovy esoriny ireto biby mangehy ahy ireto."
Ary hoy I Radama hoe: "Ianao tsy norarako va re? Aza miady aminy ianao, hoy izaho fa ianao vazaha, izy gasy!"
"Eny," hoy izy "fa diso aho. Dia mivalo aho. Fa miaiky amin-dRamahavaly aho."
Ary hoy I Radama hoe: "Ndeha esory ny biby fa izaho tsy mba manana ady amim-bazaha."
Dia niainga Ramahavaly, nojereny Leigro ka niala ny biby ary tsy hita izay nalehany. Gaga daholo ny vahoaka sy ny vazaha rehetra, ary ny Andriana toran’ny hehy.
Dia nanasina ny Andriana I Leigro ka niteny hoe: "Manasina anao aho, Ilaidama fa izaho tsy vazaha intsony fa gasy. Ary ity hasina ity no hahamasina anao."
Dia namaly ny Andriana nanatitra omby iray nafahany azy ary niteny hoe: "Dia mamahana anao aho, fa manamasina ahy ianao."
Callet, François (1908). Tantara ny Andriana eto Madagasikara.
Retrieved from "https://koloiko.com/wiki/index.php?title=Ramahavaly&oldid=140"